Sinikeza Izinsiza kusebenza Zokuvikelwa Kwemvelo Okusezingeni Eliphezulu
Umdwebo wesikimu wesimiso sokusebenza sohlelo lokususa uthuli Ububanzi besicelo se-YT-M uchungechunge lwe-pulse bag filter filter precipitator esetshenzisiwe kusetshenziswe igesi equkethe uthuli ekamelweni lokushisa, izinga lokushisa eliphansi, elonakalisayo eliphansi, elisetshenziswa futhi ekushiseni okuphezulu, igesi yemfucumfucu ebhubhisayo ngesihlungi ukuthuthukiswa kwesikhwama nokwenza kahle nokwengezwa kwemishini esekelayo, njenge: i-flue gas ye-boiler-burn boiler kanye nokushiswa kwemfucuza njll Kusetshenziswa kakhulu ku: Ifektri yemikhiqizo yezinkuni, ifektri ye-elekthronikhi, ...
Igumbi lokugaya le-spray lenzelwe ipuleti lensimbi elenziwe ngezitini nangombala nohlelo lwe-YT lobunikazi, kanye ne-fan yengcindezi engemihle ekhipha ucingo lwensimbi. Ingaphezulu lifuthwa phansi ngokuqhubekayo ukukhulisa indawo yokuxhumana phakathi kothuli nenkungu yeqhwa bese lishayisana. Iyabanjwa futhi icindezelwe echibini elingezansi ukuhlanza uthuli .. 1. Ukwamukela indlela yengcindezi engemihle yokushintshaniswa komoya eworkshop, usebenzisa ifeni enkulu yevolumu yomoya ukwenza uthuli o ...
Igumbi lokugaya elomile lisebenzisa ukwakheka kwengcindezi okungekuhle, okuvumela uthuli negesi ukuthi kungene ebhokisini elingezansi ngesango lomoya bese kuhlunga ngegobolondo lokuhlunga. Ngenxa yemiphumela ehlukahlukene yegobolondo lokuhlunga, uthuli negesi kuyahlukaniswa. Uthuli luxoshwe ku-cartridge yokuhlunga, futhi igesi lidlula ku-cartridge yokuhlunga bese lingena ebhokisini eliphezulu kusuka ku-tube tube. Umoya ohlanziwe ungakhishwa ngqo ngetheku lokubuya lomoya lomqoqi wothuli ukuqedela ...
Ngesikhathi sokusebenza kwemishini, inkungu kapende ingena kudivayisi yomhlahlandlela wesivinini esiphezulu ngaphansi kwethonya lamandla okulandelela amafeni, kanye nenkungu kapende, isishingishane namanzi enza ukusabela kwegesi-liquid emulsion ngesivinini esikhulu ukuzungezisa. Ukusebenza ngesivinini esiphezulu kwensimbi yokugeleza komoya kwenza inkungu kapende noketshezi olujikelezayo luxubene ngokuphelele, futhi uketshezi lokupenda lungahlukaniswa ngaphansi kwamandla we-centrifugal force. Ngaphakathi kwesiphepho ...
I-Yiting Environmental Protection Intelligent technology Co Ltd. itholakala eDongguan, edume kakhulu nge "fektri yomhlaba". Izinzuzo ezihlukile ngokwendawo zenza i-Yiting ukuvikelwa kwemvelo ileveli efanayo neyamazwe omhlaba futhi ihole ukuthambekela kwezimboni kusukela ekuqaleni ..
IZENZAKALO KANYE NEZIMBONISO ZEZOhwebo
Ukwakhiwa kwendawo yokusebenzela ehlanzekile efektri yokudla kudinga ukufinyelela ezingeni eliyi-100000 lokuhlanzwa komoya. Ukwakhiwa kwendawo yokusebenzela ehlanzekile efektri yokudla kunganciphisa ngempumelelo ukuwohloka kwesikhunta semikhiqizo, kwandise impilo yeshalofu yokudla futhi kuthuthukiswe ubuchwepheshe ...
Amaphuzu abalulekile wokuhlelwa: 1. Isihlungi esincane singasetshenziswa esikhundleni sesihlungi se-300000 yokwelashwa kokuhlanzwa komoya; 2. Izihlungi eziyinhloko, eziphakathi neziphakeme kufanele zisetshenziselwe ukwelashwa kokuhlanzwa komoya ngenhlanzeko yomoya engu-100, 10000 no-10000 ...
Ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko i-Yiting inethimba eliqinile le-R & D futhi yethula ubuchwepheshe obususwe kakhulu othulini emhlabeni. Ukugcinwa okuhlakaniphile Isistimu yonke yesikhangiso ...